fanontaniana Private Message Option
2 taona 5 volana lasa izay - 2 taona 5 volana lasa izay #417 by Colonelwing
Tsara ny manana an'io safidy PM io (Hafatra tsy miankina) eto Gentelmen ...
Fomba iray ihany koa mba hamafa ny LOHAHEVITRA & POST raha maniry koa isika ...
2 taona 5 volana lasa izay #418 by Dariussssss
Misy ... karazana. Azonao atao ny mandefa mailaka amin'ny mpampiasa sasany, saingy sarotra be .... hiezaka izahay hikaroka fomba vitsivitsy hananana hafatra manokana ao anatin'ny Forum.
2 taona 5 volana lasa izay #419 by Colonelwing
Misy ... karazana. Azonao atao ny mandefa mailaka amin'ny mpampiasa sasany, saingy tena sarotra….
Oh tsara ,,,
Fa aleoko manana PM ka mitoetra ao amin'ny server system system ...
Misaotra ny hahatanteraka izany amin'ny ho avy tsy ho ela,,, fantatro fa efa miasa sahady amin'ny fomba ahoana ianao ...